NATO Oo Xaqiijisay in Askar American ah lagu dilay toogasho ka dhacday Wadanka Afghanistan.
Jeneraal Odawaa oo ka badbaaday qarax lagula beegsaday Galguduud.
Weerar Sedax qof lagu dilay oo ka dhacay Koonfurta Faransiiska.
Dowladda Federaalka oo Axmed Madoobe ku eedaysay dilka Maamulihii Amal Bank Jubbooyinka.
Sawirro: Muslimiinta Bangaladheesh oo dhigay dibad baxyo ay ku difaacayaan Nabiga SCW.
Dhagayso Barnaamij Gaar Ah: Muhiimadda Adkaarta (01)
Tuesday July 30, 2019 - 16:25:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Afghanistan waxaa lagasoo sheegayaa in khasaara dhimasho iyo dhaawac leh oo hor leh dhabarka loo saariyay isbahaysiga NATO ee hoggaaminayo duullaanka gardarrada ah ee wadankaas lagu qaaday waqti hadda laga joogo 18 sanadood ka hor.
Wararka ka imaanaya Afghanistan ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday gudaha saldhig melleteri oo ay ku sugnaayeen ciidamada NATO lagu dilay ugu yaraan 2 askari oo u dhashay wadanka Mareykanka.
War kooban oo kasoo baxay isbaheysigan ayaa lagu sheegay in askari katirsan ciidamada xukuumadda Kaabuul uu toogtay laba askari American ah balse faah faahin dheeri ah lagama bixin qaabka uu weerarku dhacay.
NATO waxay warbixinteeda ku sheegtay in waqti hadda laga joogo 7 bilood gudaha Afghanistan looga dilay 14 askari kuwaas oo ku dhintay weerarada joogtada ah ee mujaahidiinta Taliban ay ka geysanayaan wadanka.
Qoraal kooban oo imaarada islaamiga ah kasoo baxay ayay ku bogaadisay weerarka uu askariga afghaniga ah ku dilay askarta shisheeye, tirada cidamada NATO ee ku dhaawacmay dagaalka Afghanistan tan iyo sanaddan 2019 ayaa lagu sheegay 60 askari balse wariyaasha iyo falanqeeyayaasha melleteriga waxay sheegayaan in tirada dhimasho iyo dhaawac ee NATO sheegtay ay intaas ka badantahay ayna gaarsiisantahay boqolaal dhimasho ah ah iyo dhaawaca kumanaan kale.
Sarkaal ciidan oo lagu dilay bartamaha magaalada Muqdisho.
Mas'uuliyiin Itoobiyaan ah oo lagu toogtay ismaamulka Cafarta.
Cudurka Carona oo dalka Iiraan ku dilay Sodomeeyo kun oo ruux.
Shacabka magaalada Burco oo dhigay dibadbax lagu difaacayo Nabiga SCW.
Dad American ah oo boob iyo bililiqo ka sameeyay magaalo katirsan dalka Mareykanka.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda weerar askar iyo saraakiil lagu dilay oo Muqdisho ka dhacay.
Maleeshiyo hubaysan oo ganacsade caan ah ku dilay magaalada Kismaayo.